Aqoonkaab waagi tagaan wax ka korodhsadaa | Aqoonkaab
waagi tagaan wax ka korodhsadaa
Jun 13, 2015Arrimaha bulshada
Waqti waliba warkii, sanad weliba sumadii, maalin waliba mahadhaded . Minityadu weys is gurayaan cadceedu wey dhacaysa dayuxuna wuu soo baxayaa malintuna habeen ayey isu badalaysaa wareegtada ayaamuhuna wey soconayaan. Amintaad la kulanataba wey ka duwan tahay tii hore waxanad hore u arkin horena u maqlina ayaad la kulmeysaa dhacdooyin cusub ayaa kusoo wajahaya kuwaas oo waano iyo waxqadasho mudan .
Waqtigu waxaa uu ka mid yahay nimcooyinka ALLE ina siiyey ee aynaan in badan
daraysaneen inta badana markuu ina dhaafo ayaa aynu ogaana qiimaha uu leeyahay
Waqtigu mar waa uu kaa qosliyaa marna waa uu kaa qiiraysiyaa, qaababka kale duwan ee waqtigana waxaa aynu nahay qaar dhadhamin doona.
Ilahay umadiisa kii ugu sharafta badan ayaa soo wajahay waqtiya adag Lana soo darsay aadmi intuu ugu necebyahay:
Ku barbaray agoonimo kuso korey cadadis tolkii kaga yimi laga saray degelkiisi goblanimanaa lagu sifiyey.
Rasuulku marnaba cadaadiska nololeed iyo bulsheed kamay hor istaagin inuu guto wajibaadkii ALLE saaray iyo bulshadii loo soo dirayba, wuxu kusoo korey sabinimo aabo iyo hooyo la’aana waa weynu dareemi karna xanuunka ay leedahay. Intuu dacwada waday wuxu kala kulmey bulshadisa caydhin aflgaadeyn iyo faquuq dhinac kasta isaga iyo intii raacdeyba, wuxu wayey garbihi iyo tageeradi uu haystay adeerkii iyo xaaskiisi Khadija, waxa laga saaray magaladisii uu jeclaa.
Xabbikeena Maxamed (scw) waa inuu inoo noqdaa qudwada aynu ku dayanayno, qaabkuu u waajihi jiray waqtiga adag iyo siduu u xalin jiray.
Isbabadalka waqtiga waxaa ku jira qiimayn uu ALLE naftaada eegaayo in aad guulaysataan waxaa ay ku xidhan tahay hadba dhanka aad ka istaagto waqtiga aad ku jirto noqo midkii xamdiga badiya waqti kasta.
Waqtigu wuu wareegaayaa waana waayo badan yahan, waxa shalay nawaaxiga dunida ka dhacay waa wax adigana kugu soo maqan. Naf ahaantadana waxa kugu dhacay waa iney ku noqdaan gashaan iyo cashar aad wax ka korodhsato, tagtadeena aynu timaadadeena ugu faaideysayno.
Ila wadaaga dhacdo ka dhacdey baqdaad 1258 isla markana kusoo laabatay baqdaad 2003
745 sano kadib wixii Mustacsim bilaah ku dhacay ayaa ku dhacay Sadaam xussen 1258 dawladii cabaasiyiinta oo uu hogaminayey mustacsim bilah waxay ku dhacdey gacanta tataar oo uu hogaminayey hulaako halkaas oo lagu diley mustacsim halka markay ahayd 2003 sadam xuseen lagu diley baqdaad ayna dawladii baqdaad ku dhacdey gacanta maraykanka oo uu hogaaminayey George W. bush marka laga yimado dilkooda waxay wadagan sida fawsha xun ee loo diley ee midna lagu udxeystay malintii cidul adxa, ka kalena laad lagu diley inta kiish lagu xidhey iyo shiciyiinta labadoodaba shirqoolkooda ka danbeysty.
Waxan kusoo afmeeraya wixi shalay dhacay waxba kama bedeli karno qomamaduna waxba inooma tarayso beritana sey wax noqon ALLE ayaa og qaybka inaga qarsoon ma qiyaasi karno waxaynu haysanaa waa maanta oo qudha hada ayaad qaabeyn kartaa qondeynka kartaa qayrkaa kula tartami kartaa qaybtada dunida ka qadan kartaa, duniduna adiga ayey ku sugeysaa ka faaideyso dhalinyarinimadada inta gabow ku iman ,waqtigaga intanad mashquulin waxad haysta 24 sacadood ee ay haysteen abubakar, cumar, xamse iyo Khalid binu walid waxay gadhayn libaanta dunida iyo ta akhiro.
waqtiga ma hayn karno lakin waa weynu habayn karnaa waana waxay sameyeen shakhsiyaadka nolosha guusha ka gadhay tariikhduna xusto magacyadooda waqtiguna kuuma istaagayo. Ha ahaato malinkatsaba mid alle kusii dhaweysa iyo ahdaaftada dunawigaba.
Waqtiga waxaa laga sameeya wax kasta, wixii aad galiso ayaanu dhalaa, waxbarasho, waxsoosaar, hormar iyo habow intaba waqti ayaa ay la xidhiidhaan.
Previous Postwindows 10, windowskii u dambeeyey ee Microsoft Next PostXikmadihii Dahabiga ahaa ee Hitler